Nweta usoro ihe nke Google Earth na AutoCAD - Geofumadas
Mee Google Curve na ngalaba na AutoCAD
Disemba, 2011 AutoCAD-AutoDesk, Apụta, Google Earth / Maps, topografia
Oge ụfọdụ gara aga, ekwuru m banyere ya Ngwa Plex.Earth maka AutoCAD, ngwá ọrụ na-adọrọ mmasị na-abụghị na mbubata, mepụta mosaics ihe oyiyi efu na digitize n'ụzọ ziri ezi, I nwekwara ike ime dị iche iche nkịtị na-eme na Gọọmenti ebe. Oge a ka m chọrọ igosi ọgbọ nke akara akara sitere na Google Earth.
Ikekwe eziokwu ahụ bụ na onye na-arụ ọrụ n'ime obodo na-arụ ọrụ na teknụzụ, Plex.Earth bụ ihe ndị ọrụ nhazi na-atụ anya site n'aka Google Earth site n'aka AutoCAD, yana nkwado maka ihe karịrị usoro nhazi 2,000.
Kedu ụdị nke AutoCAD
Plex.Earth na - arụ ọrụ site na AutoCAD 2007 mbipute na AutoCAD 2012, ma 32 na 64 ibe n'ibe.
Otu n'ime ihe ndị na-adọrọ mmasị bụ na ọ nweghị ihe na-agaghị emeli nke ịbụ ụdị nke bụ isi, CivilCAD dị iche nke nwere ụdị zuru ezu. Agbanyeghi na m dokwuo anya, nke ahụ CivilCAD nwere ike iwepụta usoro akara ma ọ bụghị mbubata onyogho georeferenced ma ọ bụ akara dijitalụ site na Google Earth.
Ụzọ iji bubata ihe
I nwere ma ọ dịkarịa ala 4 ụzọ isi bubata ihe:
Site na ntanetị (na Grid): Maka nke a, achọrọ ya naanị igosi isi abụọ na ịbịaru, njedebe nke rectangle. Nnukwu uru nke ikpe a bụ na a ga-atụgharịrị grid orthogonal na ahịrị.
Site na mpaghara akọwapụtara (Na Mpaghara): Maka nke a, na AutoCAD anyị na-ahọrọ polyline, n'agbanyeghị ụdị, ọ ga-ewepụta ya ma grid ga-abụ orthogonal na ala ala ugwu / ndịda.
Site na ugbu a Na-ele: Nke a ga-eweta usoro niile nke echiche anyị na AutoCAD
Site na mpaghara akọwapụtara na Google Earth: yiri nke abụọ, yana ọdịiche dị na mpaghara ahụ akọwapụtara na nchịkwa Google Earth
Ozugbo akọwachara njirisi ahụ, ị ​​nwere ike iji akwụkwọ ozi S (Ntọala) ma ọ bụ iji bọtịnụ aka nri ịhọrọ ụdị ihe ndị anyị na-atụ anya ibubata:
Mkpụrụ akwụkwọ ozugbo
Dijitalụ dị ka elu
Mgbe ahụ anyị na-egosi ugboro ole anyị chọrọ ntanetị, na tupu ịme nke ahụ, ọ na-ajụ anyị ma anyị ji n'aka. N'ụzọ doro anya, maka oke oke ọ nwere ike were ụwa gị, mana nke a bụ otu n'ime atụmatụ dị oke ọnụ ahịa, nke nwere ike ịdị mma ihe Microstation na-agbalị ime na Civil3D ebe oyiyi ahụ na-abịa na-acha ọcha ma na-acha ọcha ma na-enweghị nkenke nkata.
Ọzọ, anyị na-egosi ugboro ole ka anyị chọrọ isi na isi. Nakwa na nke anyị na-atụ anya ihe.
Ọgbọ nke akụkụ
Ụdị nke oghere ga-adabere na oyi akwa, lee otú e si eme ihe site na iji okporo ma ọ bụ mpaghara akọwapụtara dị ka ngwongwo.
Enwere ike jikọta data n'ime ya na nyocha nke ala, ma na-abụghị site n'ịmepụta contours na surfaces, ị nwekwara ike ịgbakọ esemokwu dị iche iche dị n'etiti etiti abụọ ma ọ bụ na mbara ala.
N'uche m, ngwa kachasị mma maka AutoCAD nke na-ejikọta Google Earth, nanị na-edepụta ngwa ngwa dị ka Egwuregwu nke n'onwe ya dị mgbagwoju anya ịwụnye. Ezigbo ego ọ na - ewe ma ọ bụrụ na ubi anyị bụ ọdịdị ala ma ọ bụ imewe.
Plex.Earth nwere ike ịbụ budata maka n'efu, n'oge ikpe nke 15 ụbọchị.
Previous Post«Previous 5 ihe dị ọhụrụ na AutoCAD 2013
Next Post Geofumadas, 2011 LegacyNext »
6 Azịza na "Mepụta usoro contour Google Earth na AutoCAD"
guettaouiaz kwuru, sị:
February, 2020 na
Juan Lopez Jimenez kwuru, sị:
April, 2013 na
Na menu aka ekpe, enwere igbe okwu ebe ị na-ede okwu akara ngosi ma ị ga - enwe isiokwu ndị metụtara isiokwu ahụ. Ọzọkwa n'elu, na nchịkọta nhọrọ kachasị elu ị nwere ike ịchọ "niile gbasara toography" enwere ọtụtụ isiokwu edepụtara.
Ọ ga-amasị m ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịkekọrịta m ụfọdụ ụlọ ọrụ LEVEL KWES IR I M ING. Ekwentị M KWURU N’IME N’IHU
Manuel Hernandez kwuru, sị:
akwukwo magburu onwe ya, ana m eje ozi otutu ntuziaka ndi a nyere ebe a. Adị m onye nkịtị ma tupu m ejiri ụlọ ọrụ desktọọpụ autodesk. N'oge a ka m na-amalite ịmalite mara onwe m na obodo 3D 2012 na obere ihe m na-aghọta ihe ọ bụ ezie na m na-efu, ọtụtụ. Ọ ga-amasị m ịma ma ọ bụrụ na ha nwere ihe ọmụma banyere otu esi atụpụta ụrọ topographies e megharịrị, ruo ugbu a, abiala m iji mepụta ebe, profaịlụ na ngalaba mpaghara.
Jorge kwuru, sị: